China Usb Chidha China Manufacturers & Suppliers & Factory
Usb Chidha - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Usb Chidha)
UK plug Dual USB Foni Cheja kune usb c
5V2.4A UK plug Dual USB Foni Cheja 5V2.4A UK plug Dual USB Ficha Chaja Tsananguro: 5V2.4A UK plug dual USB foni charger ne Smart IC tekinoroji, unogona kunakidzwa nyore desktop kuchaja kumba uye hofisi, kubhadharisa 2 USB zvishandiso panguva imwe. 1 Smart USB Ports ine yakakwira kuburitsa max 2.4A, hazvina basa kuti...
5V 3.1A USB Chitaja ine LED Night Mwenje
Min. Raira: 2000 Piece/Pieces
5V 3.1A USB Chitaja ine LED Night Mwenje 5V 3.1A USB Chitaja ine tsananguro yeUsiku Manheru : 1. Chigadzirwa chigadzirwa zvinhu chakagadzirwa fireproof PC, yakakwirira moto dziviriro giredhi. 2.Kuburitsa kamwe kunogona kuva 3.1A max, kubhadharisa zvishandiso zvako nekukurumidza. 3. Iine mwenje weUSB husiku, iva neAI...
USB Kufamba Inochinja Simba Adapter
USB Kufamba Inochinja Simba Adapter Tsanangudzo: Iyo l ight, yakawedzera slim, yakakweshika, compact dhizaini, Green simba, Kubuda Pamusoro pevhezi ekudzivirira Pamusoro pekudzivirira ikozvino pa 110-200% ye lo uye Auto-kudzorera Magetsi pfupi dunhu kuchengetedza Anoshanda tembiricha 0 ~ 40 ℃ Mahara convection...
12V 4A Akakomberedza Vertical Simba Adapter Ine USB
12V 4A Akakomberedza Vertical Simba Adapter Ine USB: Iyo l ight, yakawedzera slim, yakakweshika, compact dhizaini, Green simba, Kubuda Pamusoro pevhezi kuchengetedzwa Pamusoro pekudzivirira ikozvino pa 110-200% ye lo uye Auto-kudzorera Magetsi pfupi dunhu kuchengetedza Anoshanda tembiricha 0 ~ 40 ℃ Mahara convection...
Aluminium Alloy QC 3.0 Imwechete USB Mota Charger
Aluminium Alloy QC 3.0 Imwechete USB Mota Charger Imwechete USB QC3.0 Car Charger Tsananguro: Iyi imwechete USB mota charger ine QC3.0 nekukurumidza kuchaja basa.ibudiso yacho iri 3.6V-6.5V / 3A, 6.5V-9V / 2A, 9V-12V / 1.5A, yakazara 18W max.With 18W kuburitsa, inochengetedza. 1 / 2-2 / 3 yekuchaja nguva kune yako...
Universal 2 mu1 Mota Charger 4 USB
Universal 2 mu1 Car Charger 4 USB Ports 9.6A 9.6A 4-USB Kurumidza Mota Chaja Tsananguro: Iyi 2-USB bhaja remotokari ine 1.5m tambo uye 2-USB ports pasajajajaja, huwandu hwe4-USB. Kuburitsa kwakanyanya kwembiru imwe neimwe ndeye 2.4A, yakazara 9.6A yemakuru mana e USB. Unogona kubhadharisa zvishandiso zvina mumotokari...
Kurumidza Kura 3.0 Dual USB Car Charger
Kurumidza Kura 3.0 Dual USB Car Charger QC3.0 Dual USB Fast Car Charger Tsananguro: Iyi mbiri-USB mota yekuchaja ine 48W yakakura kubuda, ese maviri mapaipi ari QC 3.0 yekuchaja chiteshi. Kuburitsa kweimwe neimwe doko re USB ndiko 3.6V-6.5V / 3A, 6.5V-9V / 3A, 9V-12V / 3A (36W Max), saka paunenge uchingoshandisa...
Dual USB Car Charger 2pcs QC3.0 maPorts 48W
Dual USB Car Charger 2pcs QC3.0 maPorts 48W QC3.0 Dual USB Car Charger Tsananguro: Iyo ndiyo huru yekuburitsa mota muchaja munyika - Kune 2pcs QC3.0 chiteshi, inogona kusvika 36W kuburitswa kune rimwe nerimwe madoko. Paunoshandisa 2 USB madhigi panguva imwe chete, iyo yakakwana kuburitsa inogona kusvika 48W! Icho...
Dhesiki yepamusoro 6 USB Charger 5V10A Smart IC
Dhesiki yepamusoro 6 USB bhaja Ine Smart IC 5V10A 6 Port USB Chidimbu Tsananguro: Iyo yakawanda USB charger ine super mini size-- 92 * 92 * 27mm ine 50W kuburitsa. Iyo glossy imba, ita kuti chaja inotaridzika chaizvo uye yakasarudzika. Nekuvaka mu smart IC, tekinoroji, charger inogona kugovera ikozvino yakakodzera...
6USB Chaja ine Type C uye QC 3.0
6USB Chaja ine Type C uye QC 3.0 6 USB Type C Chaja Tsananguro: Aya matanhatu madhishi USB tafura yepamusoro yepamusoro charger inosanganisira 1 Type C USB port, 1 QC3.0 USB port, uye 4 USB madoko ane smart IC. Simba rayo rose rekuburitsa rinosvika 50W. Iyo inoburitsa Type C port ndeye 2.4A, imwe nguva inogona kusvika...
Ac Dc USB Adapter Dc Kubuda nekukurumidza kubatana
Ac Dc USB Adapter Dc Kubuda nekukurumidza kubatana Ac Dc USB Adapter Dc Kubuda nekukurumidza batanidza D kunyorwa: Chinhu ichi 5V3A adapteris yedu inopisa tengesa chigadzirwa, Vatengi vazhinji vangada kushandisa zvinhu izvi zvefoni / loptop simba bhangi charger adapta, izvi zvinhu zvidiki nehuremu uye muviri...
Usb Ku 12V Dc Simba Adapter Cable
Foldable Inokurumidza Shaja USB Foni Chaja 5V2.1A
Foldable Inokurumidza Shaja USB Foni Chaja 5V2.1A 5V2.1A Foldable US plug USB Charger Tsananguro: Nemhando yekunyepedzera yeganda zviyo, mavara akasarudzika uye compact dhizaini, ita iyi foldable US plug USB bhaja inotyisa kwazvo inotengesa mumusika weWarrewide !! 2 USB port inobvumira kuchaja 2 USB zvishandiso...
Usb Chidha USB Chidha Car Usb Cheja Mini Usb Cheja Multi Usb Chaja Yakanaka Usb Car Chidhairi 3 Usb Mota Chaja 3 Usb Car Charger